FIHAONANA AN-TAMPON’NY FAHA-39 NY SADC : Ainga vao ho an’i Madagasikara sy ireo firenena Afrikanina
Manga ny lanitr’i Madagasikara amin’ny fifandraisana amin’ireo firenena Afrikanina mpikambana ao anatin’ny vondrona Sadc. 19 août 2019
Ainga vao ho an’ny firenena Malagasy indray ary hanamora ny lalana mankany amin’ny tanjon’ny fampandrosoana ny tosika sy ny fifanakalozana eo amin’ireo firenena samy ato anatin’ny kaontinanta Afrikanina. Notanterahina tany Tanzanie ny fihaonana an-tampony ara-potoana faha-39 eo anivon’ny Sadc. Miisa 16 ireo firenena Afrikanina mpikambana ao amin’ity vondrona ity ary anisan’izany i Madagasikara. Manatrika izany an-toerana ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina miaraka amin’ireo delegasionina tarihiny. Ity no fivorian’ny Sadc voalohany natrehin’ny Filoha taorian’ny nahavoafidy azy ho Filoham-pirenena. Efa nahavita ny fandraisam-pitenenany teo anatrehan’ireo firenena Afrikanina mpikambana ny Filoha.
Nisongadina tao anatin’ny lahateniny ny fahavononany hampandrosoa haingana an’i Madagasikara. Manana vina ny handray anjara mavitrika amin’ny fanarenana an’i Afrika ihany koa Madagasikara, hoy izy. Tsy tanteraka anefa izany raha tsy eo ny fanamafisana ny fifanakalozana ara-toekarena eo amin’ny samy firenena Afrikanina. Nambarany fa vonona i Madagasikaran ny hampitombo ireo vokatra haondrana mankany Afrika. Nohamafisiny fa efa voafaritra ireo asa laharam-pahamehana hampandrosoana an’i Madagasikara. Isan’izany ny fahavitan-tena ara-tsakafo, fanomezana toeram-ponenana sahaza ho an’ny rehetra, fahasalamana sy fanabeazana, fitantanana tsara rindra ny harena voajanahary, fananganana orinasa, fahavitan-tenan’ny vehivevy, fanampiana ny tanora ary ny fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena.
Ankoatra izay dia isany nisongadina tao anatin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ihany koa ny hetahetany mba tena hampiray sy hampitambatra an’ireo firenena 16 mpikambana ao aminy ny Sadc. “Handrandraiko fatratra mba hisy fiantraikany ara-toe-karena eo amin’ireo firenena ireo ny fandaharan’asan’ny Sadc”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina.